१५ वर्ष : १५ कुणा - नागरिक रैबार
नेपालमा लोकतन्त्रको यात्रा सुरु भएको ७० वर्ष पुग्यो । बितेको ७० वर्षमा नेपालमा पटकपटक राजनीतिक, सामाजिक क्रान्ति र आन्दोलनहरू भए । सबै आन्दोलनपछि समाज एक कदम अघि बढेको दाबी पनि गरियो । तर, सात दशकको लोकतान्त्रिक यात्रामा कर्नालीको मुहार फेरियो कि उस्तै छ ? ७० वर्षे लोकतन्त्रलाई कर्नालीबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ ? हेरौँ कर्नालीका कथा :
१० फागुन, कर्णाली (सुर्खेत) । सुर्खेत वीरेन्द्रनगरकी १८ वर्षीया एक किशोरीको क्याम्पसकै सहपाठी साथीसँग पे्रम सम्बन्ध थियो । बिहे गर्ने वाचासँगै उनीहरुबीचको प्रेम सम्बन्ध दरिलो हुँदै थियो । जब प्रेमीले किशोरीको पेटमा गर्भ रहन गएको थाहा पाए, त्यसपछि विस्तारै टाढिँदै गए । अन्ततः उनीहरुबीच प्रेम सम्बन्ध टिकेन । प्रेमीले धोका दिएपछि २०७६ साल माघमा ती […]